Maxkamad ku Taala Magaalada Qaahira oo Xukuntay Suxufiyiinta TV Aljazeera – STAR FM SOMALIA
Maxkamad ku Taala Magaalada Qaahira oo Xukuntay Suxufiyiinta TV Aljazeera
Maxkamadan, ayaa min saddex sano oo xabsi ah ku xukuntay Suxufiyiinta ka tirsan Telefishinka Caalamiga ah ee Aljazeera, markii ay ku heshay inay tebiyen warar khaldan.
Maxkamadda, ayaa sidoo kale sheegtay Suxufiyiintaasi inay taageero u fidiyen Ururka Ikhwaanul Muslimiinka Masar, oo sanadkii hore la mamnuucay.
Mohamed Fahmy, Baher Mohamed iyo Peter Greste, ayay Maxkamaddu sheegtay min saddex sano oo xabsi ah inay ku xukuntay, inkastoo Mohamed Fahmy uu wejihi doono lix bilood oo dheeri ah.
Suxufiyiintan, ayaa horey si xoogan u diiday eedeymaha ay u soo jeedisay Xeer Ilaalinta Masar, waxayna sheegeen in shaqadoodu ahayd mid ay si sax ah u gudanayen.
Peter Greste, ayaa horaantii sanadkan dib ugu laabtay dalka Australia oo uu u dhashay. Mohamed Fahmy oo u dhashay dalka Masar, sidoo kalana haysta dhalashada dalka Canada, ayaa lagala noqday dhalashada dalka Masar.
Bayaan ay soo saartay Aljazeera, ayaa lagu sheegay in xukunkan uu yahay mid lagu weeraraayo xoriyadda Saxaafadda, isla-markaana ay maalin madow u tahay Cadaaladda Masar.
Dab Qabsaday dhisme ay dad badan degenaayeen magaalada Khober(Daawo Sawiro)